महिला कन्डम भनेकाे के हाे ? कसरी प्रयोग गर्ने (भिडियोसहित) - Chitwan Online Khabar
८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:४९
महिलाले योनिमा पसाएर लगाउने कन्डम नै महिला कन्डम हो । पहिले अर्थात् पहिलो जेनरेसन (FC 1) का महिला कन्डम पोलियुरिथिन, जुन एक किसिमको प्लास्टिक हो, बाट बनेका हुन्थे । यसको प्रयोग गर्दा चुइँकिने किसिमको आवाज आउने भएकाले धेरैले मन पराएनन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. थपलिया नियुक्त
अब बसभित्र पनि रक्तदान गर्न सकिने